Yaa’iin Innooveeshinii Diijitaalaa Afrikaa 19ffaan gaggeeffamaa jira – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
On May 11, 2022 37
Finfinnee, Caamsaa 3, 2014 (FBC) – Yaa’iin Innooveeshinii Diijitaalaa Afrikaa 19ffaan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira.
Yaa’ichi qabiyyee fi tajaajila diijitaalaa irratti xiyyeeffachuun gaggeeffamaa jiraachuu ibsameera.
Biyyoonni akka Ityoophiyaa aadaa fi afaan hedduu qaban qabiyyee fi tajaajila diijitaalaa hawaasaan ga’uun hirmaachisummaa diijitaalaa mirkaneessuu akka qaban Ministir Deetaan Ministeera Innooveeshinii fi Teeknooloojii Huuriyaa Aliin ibsaniiru.
Ityoophiyaan tarsiimoo diijitaalaa 2025 ishee keessa qabiyyee fi tajaajila diijitaalaa galchuun hojjechaa jiraachuu himuun, dhiyeessitoonni qabiyyee biyya keessaa, oppireetaroonni telekoomii fi dhaabbileen idil addunyaa damicharratti bobba’an itti fufiinsa qabiyyee diijitaalaa mirkaneessuuf ga’ee isaanii ba’achuu akka qaban dhaamaniiru.
Daayrektarri olaanaan Abbaa Taayitaa Kominikeeshinii Ityoophiyaa Injinar Baalchaa Reebaan gamasaaniin, Imala diijitaala Ityoophiyaa galmaan ga’uuf mootummaan xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu addeessaniiru.
Ityoo Telekoom tajaajila neetwoorkii dhaloota 5ffaa( 5G) eegaluun isaa uwwisa tajaajila diijitaalaa babal’isuuf ga’ee olaanaa qabachuu eeraniiru.
Yaa’icharratti hoggantoonnii fi ogeeyyiin damichaa biyyoota 30 olii akkasumas dhaabbileen tajaajila telekoomii kennan hirmaachaa jiru.
Fatiyaa Abdallaatu gabaase.
Ogeeyyiin Ministeera Fayyaa qonnaa magaalaa ammayyeessuuf sirna odeeffannoo kalaqan
Ityoophiyaan kuusaa ragaa biyyee irratti qonna ICT jalqabde
Magaalaa Adaamaatti agarsiisni saayinsii fi teeknooloojii baname
Turk konkolaattota humna elektirikaan hojjetaniif bu’uuraalee misoomaa diriirsuuf…
Ogeeyyiin Ministeera Fayyaa qonnaa magaalaa ammayyeessuuf…
Magaalaa Adaamaatti agarsiisni saayinsii fi teeknooloojii…